Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 13
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 13
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 13
MuEvangeri raRuka Jesu anoonekwa ari munhu akarurama achifamba pakati pevanhu.
Ruka anobva atidzidzisawo kuti tingatenda, kufunga uye kurarama sei sevanhu.
Ruka aive akasimbirira pakutaura Evangeri kuvaHedeni. Saka akataura pamusoro pekukanganisa kuzhinji kwakaitwa nevaJuda paKuuya kwaJesu kwekutanga nekuti akaona kuti isu maKristu maHedeni tichaita kukanganisa kumwechete ikoko paKuuya kwechipiri kwaJesu. Pamusoro pazvose kusaziva uye humbwende zvakagara zviri muvanhu kubvira kare nakare.
Saka Ruka akanyora kuitira kuti atipe isu maKristu yambiro pamusoro pekukanganisa kwedu mumakereke achinongedzera kukanganisa kwakaitwa nemaJuda.
Ruka Chitsauko 13
Gumi nematatu (13) chiverengo chekumukirana.
GENESISi 14:4 ... Makore anegumi namaviri, vakamumukira negore regumi nematatu.
Zvakazarurwa Chaputa 13 inotiratidza kusimuka kwechikara chinotyisa chine simba Roman Catholic (kana simba rekereke-zvematongerwo enyika-nemari) uye chikara cheAmerica chinotonga (kana kuti simba remasangano anopikisa Catholic -rezvematongerwo enyika-resainzi-remauto-uye remari) izvi zvose zvinomukira Mwari neShoko rake zvichiunza chiratidzo chechikara chichange chiri kusukurudzwa kwepfungwa dzevanhu nezvidzidzo zvisiri muBhaibheri.
Mienzaniso mishoma inotionesa kuti maKristu abva zvakadii paMagwaro: MaKristu ari kudzidziswa kutenda muzvinhu zvisiri muMagwaro zvakaita sedzidziso yeBig Bang neshanduko yevanhu kubva kumhuka. Kuroorana kwevanhu pahungochani. Masangano emakereke. MaKanoni. MaDayosisi. MaAchibhishopu, makadinari nemaPope. MaPurisita anorambidzwa kuroora. Vaparidzi vanopfeka makora. Mazai eIsita. Mabhanzi anopisa emuchinjiko. Zvivakwa zvemakereke zvine zvindori uye jongwe pamusoro pazvo. Nzvimbo inochengetwa mweya yevakafa. Renti. Kuita chipiyaniso. Chuma chekunamata nacho cherozari. Kunamata kuvatsvene vakafa. Kudya hove musi wechishanu. Makathedhiro makuru nemabhasirika.
MaKristu arikudzidziswawo kutenda chikamu chezviri muMagwaro asi nenzira yakachenjera vari kubva varasiswa kupfurikidza kuwedzerwa kwedzidziso dzakaitwa nevanhu. Jesu Kristu akaberekerwa muchidyiro kuBeterehema. Ichokwadi. Asi zuva rekuti 25 Zvita nemuti weKisimusi zvese hazvimo muBhaibheri. Muti hauna chekuita nekuzvarwa kwaJesu.
Iyi ndiyo nzira inobata nechiratidzo chechikara chichisvibisa pfungwa dzedu zvishoma nezvishoma. Kereke yakanyengera mafungiro edu nenzira yakachenjera kuti titende muzvinhu zvakaitwa nevanhu zvinouya sezvakanaka, isu tinobva tada kunamata nenzira iyoyo. Nekugamuchira zvinhu zviduku zvisimo muBhaibheri tichiti ichokwadi, tinobva tarerukirwa nekutambira zvinhu zvikuru zvisimo muBhaibheri. Chiratidzo chiri pahuma dzedu. Pahuma dzedu pane njere dzedu. Munjere dzedu tinofunga. Kufunga kwedu kwakatapwa kukarongwa nenzira yezvitendero zvemasangano edu.
Kurarama nezvinotaurwa neBhaibheri hakusisina kutikoshera zvachose.
Saka Ruka chaputa 13 inotanga nekutizivisa kumukira maRoma kusina kubudirira kwakaitwa nemamwe maJuda.
Ruka 13:1 Nenguva iyo vamwe vakanga varipo vakamuvudza shoko ravaGarirea vakange vavhenganisirwa ropa ravo nezvibayiro zvavo naPirato.
MaJuda aive amukira muRoma aive nehutsinye Pontiusi Pirato akarurama, aive mutongi aive nenyota yeropa.
Pirato aive asingafunge kaviri kana ada kuburitsa munondo wake usina tsitsi waive waita kuti mauto eRoma aive nehutsinye kwazvo atyiwe pasi rose. Roma yakatonga nehutsinye hwaive hwakaoma setsvimbo yedare pane vese vaida kuimukira.
Ruka 13:2 Akapindura akati kwavari; Munoti vaGarirea avo vakanga vari vatadzi here kupfuvura vaGarirea vose, zvavakatambudzika saizvozvo?
Avo vakavurawa vaive vasina kuipa kupinda vamwe vaJuda. Vakangoita sarudzo isiriiyo chete. Vakakanganisa zvikuru nekuda kuita mbiri kupfurikidza kumukira Roma kune mbiri kwavaive vaita. Asi vaive vasina mukana nokuti Roma yaive nesimba kwazvo. Vaivewo mapofu pakusaziva kwavo kuti vaifanira kumirira Mesias. Iye oga aizoziva kuti oita zvipi. Saka, kushaiwa kutsungirira kumirira Mesias, vakavimba nekugona kwavo ivo kwaive kusina zvakunoreva. Pirato akadzidzawo pakuita uku kuti kuuraya vapikisi yaive nzira yakanaka yekutonga nayo. Aizoshandisa nzira imwechete iyi kuna Jesu.
Philo, wezvenhorondo ane mbiri wemusenturi yekutanga akati Pirato semunhu aive “nehukasha uye kuita kwekutsamwa kukuru”. Saka kumukira munhu akaita saiye kwaive kuzvitongera rufu.
Chakagonekwa nekumukira kwavo chete kwaive kuburitsa pachena hunhu hwaPirato hwaive huzere hukasha zvaizobatsira kutsanangura kuti nei nekufamba kwenguva aizouraya Munhu aive asina mhosva, Jesu, Mambo wavo wechokwadi, nekuti vaive vatsvairwa nekurwadziswa moyo nevatungamiri vavo vezvitendero. Asi pakutanga kwevhiki rimwechete iroro vaive vatambira Jesu saMambo paakatasva mbongoro pamusi weSvondo yemichindwe. Saka ndiko kushanduka kunoita hunhu hwevanhu. MaJuda nehumbwende uye nekupusa vakateerera vakuru vavo vezvitendero. Zvinhu zvishoma zvakaipisisa kupfuura kuparidza kwevatungamiri vezvechitendero vachirwira chitendero chesangano ravo. Mukumukira kwavo kwavanoita chokwadi, maJuda akaita chokwadi chekuti Jesu, Shoko, akava akatukwa.
Ruka 13:3 Ndinokuvudzai: Kwete, asi kana musingatendevuki, imi mose muchavurawa saizvozvo.
MaJuda akamukira Jesu Kristu, vakamuramba vakamuuraya mugore raAD 33.
Vakafunga kuti vaive vakunda mukuita kwavo kwekusatenda kukuru.
Asi muna 66 AD maJuda akamukira Roma. Makore mana akazotevera muna AD70 mukuru wemauto ekuRoma Titusi, mwanakomana kana kuti nevanji wamambo weRoma Vespasian, akasvikira Jerusarema akaparadza temberi, akasiya guta rava matongo. MaJuda 1 100 000 vakauraiwa vamwe vakafa nezvirwere nenzara mukuita uku.
MaJuda akamukirazve mambo weTrajani kubva muna 115- 117 AD vakakundwa nekuuraiwa muhondo zhinji. Muna 132 AD maJuda vaimukira maRoma kechitatu. Mambo weRoma Hadrian akazopedzisira avakunda muna 135 AD akaisa maJuda pahutiziro kubva kuJerusarema yaakanga avaka patsva seguta guru reRoma idzva Aelia Capitolina. MaJuda akabva apararira nepasi rese kwavanosangana nekutambudzwa nekuuraiwa kusingaperi (pogroms) kwemakore 2 000. Izvi zvakambokura kubva muna 1941-1945 apo maJuda 6 miriyoni akauraiwa mukuuraya kwaHitler kwaakaitira mudzimba dzine mweya wegasi kuPoland. Pakupedzisira vakazotenderwa kudzoka muParestina muna 1948 kuti vave nyika zvakare, vakapona hondo ina dzemaArabu nekumwe kurwiswa nezvombo kusingaperi nemapoka maduku ainyanya kubva kuGaza neRebanoni, uye zviuru zvemaroketi zvaiputitsirwa pavari uye mambomba anenge ari pavanhu. Kukura kwendufu idzi kunoramba kuchikura.
Shoko raJesu raive razadziswa zvakazara.
Ruka 13:4 Kana vaya vanegumi navasere vakawirwa nesvingo yeSiroami, ikavavuraya munoti vakanga vanemhosva kukunda vanhu vose vaigara Jerusarema here?
5 Ndinokuvudzai; kwete, asi kana musingatendevuki, imi mose muchavurawa saizvozvo.
Zvakare Jesu anoyambira pamusoro pehuwandu hwemaJuda husingaverengeki vachafa. Gumi nevasere vakafa vaive vasiri ivo maJuda akaipisisa. Kwatiri, ava vaingova vangosanganisirwawo, ndufu dzetsaona uye kubva pamaonero edu sevanhu zvinoita sekuti rufu rwakabata vose maJuda akanaka neakaipa nekuti rwaive zvawanawo mukana. Vaive vasina chakaipa chavaiita, vaingove panzvimbo dzakaipa nenguva yakaipa. Nekuti maJuda akaramba kutendeuka nekugamuchira Jesu semuponesi wavo, vakaiswa munzvimbo dzakaipa pamweya, uye nenguva dzakaipa uye nzvimbo dzakaipa neruvengo rukuru kubva kune mamwe marudzi kwakaita kuti maJuda arangwe nemutongo wakaoma kwazvo pakumukira kwavakaita Jesu. MaJuda asangana nenguva yakarebesa yekutambura nekurwiswa nemarudzi mazhinji munhorondo yavo.
Ruka 13:6 Zvino wakataura mufananidzo uyu: Mumwe munhu wakanga anomuvonde, wakanga wakasimwa mumunda wake, wemizambiringa; akavuya achitsvaga zvibereko kwauri, akashaiwa.
Muvonde mucherechedzo wemaJuda kunaMwari. Jesu akauya kumaJuda asi vakashaiwa zvibereko zvekutenda maari. Havana kutenda kuti aive muponesi Mesiasi wavo aive akavimbiswa nekuti akauya nenzira inozvidzwa zvakanyanya. Vakamumukira vakakumbira rufu rwake.
Ruka 13:7 Ipapo akati kumurimi womunda wemuzambiringa: tarira ndavuya makore matatu ndichitsvaka zvibereko pamuvonde uyu, ndikashaiwa; uuteme unotadzireiko pasi?
Calvari ndiko kwakava kurambwa kwaJesu zvakazara nevaJuda. Mwari aifunga kutumira hondo yemaRoma kuzoparadza Temberi neguta reJerusarema.
Ruka 13:8 Akapindura, akati kwaari; Ishe muuregei henyu nhaka, kusvikira ndichiurimira, nokuuisa mufudze zvakanaka;
Asi akasarudza kuvapa umwe mukana. Saka muti weIsraeri wakachengetwa. Pachinzvimbo chekuparadza maJuda, Mwari akatumira vaporofita kuti vavaparidzire kuti pamwe vanganunurwewo zvisinei nechivi chavo chikuru chekuuraya Mesiasi.
Ruka 13:9 Kana ukazobereka zvibereko, zvakanaka; asi kana usingabereki, mungazoutema henyu.
Jesu akaparidzira maJuda asi vakamuramba. Mukana wavo wekutanga wakanga wapera. Kunyangwe mushure mekumuuraya, Jesu akatumira vadzidzi vake kumaJuda saka kwaive kuvapa mumwe mukana.
Asi maJuda mazhinji akarambawo Evhangeri. Saka maJuda akarambawo mukana wechipiri wavaive vapiwa. Mutumwa wemuTestamente Itsva kwavari aive Pauro. MaJuda akamuramba.
Mabasa 13:46 Ipapo Pauro naBarnabasi vakataura vasingatyi, vakati: Zvakanga zvakafanira kuti shoko raMwari ritange kutaurirwa imi, asi zvamariramba, muchiti hamufanirwi novupenyu bwusingaperi, tarirai, zvino toenda kuvaHedeni.
Ndapota tarirai kuti Ruka akashandisa Chaputa 13 yeBhuku raMabasa kuti atiudze pamusoro pekumukira kwakaitwa nerudzi rwemaJuda vachimukira Evhangeri zvakazomanikidza Pauro kuti atendeukire kuenda kuvaHedeni.
Saka muti werudzi rwemaJuda waive wakaiswa pakunamata muTemberi waizotemerwa pasi, nekuda kwekusaunza zvibereko zvekutenda munaJesu Kristu seShoko raMwari.
VAGARATIA 5:22 Zvino chibereko chomweya ndirwo rudo, nomufaro, norugare, nomwoyo murefu, nomwoyo munyoro, nokunaka nokutendeka.
MaJuda serudzi vakabva varasawo zvibereko zvehunyoro uye rugare, vakamukira Roma zvakaipisisa mukurwisana kwakaipa kwemakore mana zvakazoita kuti vatemerwe pasi nemukuru wemauto ekuRoma Titusi muna AD 70 paakaparadza Temberi nedzimwe nzvimbo zhinji dzeguta reJerusarema.
Iyi iyambiro kwatiri zvakare. Nguva yedu yekereke yekupedzisira yeRaodikia iyo Jesu akamira kunze kwemusuwo wekereke. Kurambwa kunoitwa Magwaro nekereke kuchakonzeresa kuti kereke itemerwe pasi munguva yeKutambudzika kukuru. Saka tiri kurarama munguva inotyisa kwazvo.
20 Tarira, ndimire pamukova; ndichigogodza;
Makereke edu nhasi uno anoti Kristu ari mukereke. Bhaibheri rinoti akamira panze pamukova, achiedza kuti apinde. Chisarudzai kuti ndiyani ane chokwadi.
Ruka anobva aburitsa chimwe chiitiko pakati paJesu nemaJuda chine chiratidzo chenguva yaizouya kukereke yemaHedeni. Ruka anoda kuti isu maHedeni tidzidze kubva pane zvakatadzikwa nevaJuda, nekuti tikasadaro kereke yemaHedeni inopedzisirawo yasangana nekurovererwa kukuru uye rufu munguva yeKutambudzika kukuru nekuda kwekusatenda kuTestamente Itsva.
Mukadzi anomiririra kereke inova mukadzi waKristu.
II VAKORINTE 11:2 Nekuti ndine godo pamusoro penyu, negodo raMwari, nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe, kuti ndikuisei kuna Kristu semhandara yakachena.
Jesu akaponesa mukadzi akaremara (chiratidzo chekereke inoda simba raJesu kuti riidzose pachinzvimbo chayaive pakutanga) musi weMugovera akapomerwa mhosva yekushanda neSabata.
Ruka 13:12 Jesu akati achimuvona, akamudana akati kwaari: Mai, wasunungurwa pavurwere bwako.
13 Akaisa mavoko ake pamusoro pake; akatasanudzwa pakarepo, akarumbidza Mwari.
14 Zvino mukuru wesinagoge akatsamwa; nokuti Jesu wakaponesa nomusi weSabata; akapindura akati kuvanhu vazhinji, mazuva matanhatu aripo, anofanira kubatwa nawo; vuyai naiwayo, muporeswe; asi musavuya nomusi weSabata.
15 Asi Ishe wakamupindura akati: Imi vanyengeri! Ko mumwe nomumwe wenyu haangasununguri mombe yake kana mbongoro yake pachidyiro nomusi wesabata, akaenda nayo kundoinwisa here?
Mutungamiri wechitendero akapikisa kuponeswa kwaive kwaitwa mukadzi achidzoserwa pahutano hwake chaihwo.
Nhasi, vakuru vezvitendero ndivo vanoramba kuti kereke idzoserwe pachinzvimbo chayaive pamazuva eTestamente Itsva.
Tarirai, hupikisi kuna Jesu (Shoko) hunobva kuvakuru vemasangano. Nhasi uno sinagoge tinodaidza kuti kereke. Mukuru ndiye mufundisi.
Jesu nekuva achinyatsoziva pamusoro pevakuru vezvitendero, akamuudza pachena. Akapomera mukuru wechitendero kuti munyengeri. Munonwisa zvipfuyo zvenyu musi weMugovera. Nei mukadzi asingatenderwi kutorawo mvura yeruponeso yeHupenyu?
LUKE 13:16 Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbrahama wakanga akasungwa naSatani makore ane gumi namasere, haazaifanira kusunungurwa nomusi wesabata pachisungo ichi here?
17 Zvino wakati areva izvozvo, vadzidzi vake vose vakanyadziswa; asi vanhu vazhinji vose vakafara nezvinhu zvose zvakaisvo-naka zvakaitwa naye.
Vanhu vaida Jesu asi vechitendero vaive vachipikisana naye.
Mukuru wechitendero akashoropodza Jesu nekuti aive chipingaidzo mubato rezvechitendero.
Ndapota tarirai, Kuuya kwaJesu kwekutanga kwakaraira vakuru vezvechitendero vemaJuda.
Achati kudii kuvakuru vemakereke paKuuya kwake kwechipiri?
Zvino Ruka anotsanangura chiporofita chenguva yaizouya. Makore 2 000 enhorondo yekereke akapatsanurwa kuva nguva nomwe dzemakereke. Pakudarika kwenguva dzemakereke, vakuru vemakereke vakaedza nepavanogona napo kubvisa vanhu kuna Jesu anova Shoko raMwari. Vakuru vemakereke vakagona sei kubvisa vanhu paShoko rakanyorwa muBhaibheri kuti maKristu atende muzvidimbu zviduku zvezvakanyorwa muBhaibheri vachiramba zvimwe zvose?
Jesu achishandisa mifananidzo miviri, akafananidza chiporofita chakanakisa nenguva dzemakereke enguva mbiri dzemakereke dzaizouya.
Kune mifananidzo minomwe yakataurwa kuna Mateo chaputa yechigumi nematatu. (gumi nematatu zvakare). Mufananidzo wega wega unomiririra nguva yekereke. Pamifananidzo iyi Ruka akataura pamusoro pemifananidzo miviri chete, mufananidzo wechitatu newechina. Nguva yekereke yechitatu neyechina inomiririra nguva dzeRima (Dark Ages), kubva muna 312 AD kusvika kuna 1517 AD, kereke yeRoman Catholic yakatonga muEurope ikamukira Shoko raMwari vakadzivisa vanhu kuti vasashandise Bhaibheri. Bhaibheri raitenderwa nguva iyoyo raive mururimi rwechiRatini chete rwaikwanisa kuverengwa nemaPurisiti chete. Kereke yakauraya William Tyndale ikachera nekupisa mapfupa aJohn Wycliff nekuti vakashandura rurimi rweBhaibheri vachiruisa mumutauro unotaurwa nevanhu mazuva ese.
Saka Jesu akabva atsanangura kuti kumukira Shoko uku kuchaitika sei.
MaJuda akamukira Jesu seMunhu. Kereke yakamukira Jesu seShoko raMwari.
Mufananidzo uyu unomiririra nguva yekereke yechitatu yakararama kubva muna 312 AD kusvika kunana 600 AD.
RUKA 13:18 Zvino akati: Vushe bwaMwari bwakafanana neiko? Ndichabwufananidza nei?
19 Bwakafanana netsanga yembeu yemastarda, yakatorwa nomunhu akaikanda mumunda make, ikamera, ikaita muti, shiri dzokudenga dzikagara pamatavi awo.
Mbeu yemastarda, ikarimwa zvakanaka, imbeu duku inokura kuita gwenzi.
Mwari haana kubvira ada kuti kereke ikure.
Ndicho chikonzero nei vanhu vaisangana mudzimba panguva yekereke yekutanga yeTestamente Itsva. Hakuna munhu mumwechete aikwanisa kutonga sangano guru.
VAROMA 16:5 Ndikwazisireivo kereke iri paimba yavo.
FIREMONI 1:2 Nokuna Apfia, hanzvadzi yedu, nokuna Arkipo, murwi pamwechete nesu, nokukereke iri mumba make.
VAKOROSE 4:15 Ndikwazisireivo hama dziri Raodikoa, naNimfa, nekereke iri mumba mavo.
Tinofanirwa kutarisisa chinhu ichi kana tichida kudzokera kuva sekereke yekutanga.
Ndapota tarisai, vanhu vaidaidzwa kuti kereke, kwete chivakwa. Bhaibheri harina kubvira rataura kuti kune munhu akaenda kukereke.vanhu ndivo vaive kereke.
Pakutanga maKristu vaisangana vari zvikwata zviduku nekuti maRoma aida kuvauraya. Kubva muna AD 64 kusvika muna AD 312 madzimambo eRoma akatanga kurovererwa kwemaKristu kunosvika kagumi kwakauraya maKristu anosvika mamiriyoni matatu. [Kumwechete kwekuuraya uku kwakatangwa namambo Aurelian akabva azosarudza zuva 25 Zvita kuva zuva rakazvarwa mwari wezuva, SoI Invictus (zuvarisingakundiki). Zuva iri rakatanga kutaurwa kuRoma mukarenda rePhilocalian muna 354 AD sezuva rekuzvarwa kwamwari wezuva uye zuva rekuzvarwa kwaKristu. Kupira kuna mwari wezuva uku uye kumupemberera kwakatevedzerwa nekereke yeRoman Catholic sezuva rakazvarwa Mwanakomana waMwari zvakavatendera kutorawo tsika dzeRoma yechipegani dzekupanana zvipo uye muti wakashongedzwa wechipegani uye bazi remuti reruvara rwemashizha manyoro uye kushongedza kwemuti wemuhori neweivhi. Musakanganwe kuti munhu akatanga mhemberero idzi aive muurayi wemaKristu aive nehutsinye kwazvo.]
Kereke yekutanga yakapararira nekuti yaive yakangoti mwanda nenzvimbo dzese uye nekuti vaisangana muzvikwata zviduku, kunyanya mudzimba. Pavaiungana munzvimbo dzeruzhinji kana “kereke” mauto eRoma vaivasunga zviri nyore nekuvauraya. Kusangana mudzimba ndiyo nzira yakararama nayo kereke yekuChina uye vachiri kurarama mukati mekurovererwa kukuru nevadzvanyiriri.
Muna 312 AD mambo weRoma Constantine akamisa kuurayiwa kwemaKristu maKristu akatanga kusangana munzvimbo dzezvivakwa zveruzhinji zvakabva zvadaidzwa kuti makereke kuri kukanganisa. Kereke ndiwo muviri wevatendi , kwete chivakwa chavanosanganirana. Saka ungano yakabva yakwanisa kukura. Dzimwe nguva maKristu aitora matembere makuru akanaka emapegani. Asi panokura mbeu yemastarda musango, ndipo painogona kuita muti mukuru unenge usina kunaka. Kukura musango zvinoreva kuti kutora tsika nepfungwa dzisimo muBhaibheri. Ungano inobva yatambira hutungamiri hwevanhu husina kutaurwa muBhaibheri uye zvigaro zvinobva zvabudapo zvirinemitemo yakaitwa nevanhu yezvavanoti mirayiro yekereke uye tsika dzekereke. Mifungo yevanhu nezvido zvavo zvinobva zvakurira zvimwe zvose. ChiKristu chaive chatanga kuyanana nechipegani uye nezvematongerwo enyika. Matembere emapegani aibatwa nemaprista, saka kereke yakatevedzera pfungwa iyoyo yekuva nemuprista nekufamba kwenguva ikazoisa mufundiso pamusoro pakutonga kereke.
Bhaibheri harina kubvira rataura kuti mufudzi (mufundisi) ndiye musoro wekereke. Bhaibheri harina kubvira rataura kuti mufudzi mufundisi. Izwi rekuti “pasita” “mufudzi” rakataurwa kamwechete chete muTestamente Itsva. Asi nhasi uno mufundisi “pasita” akatora simba rekuva pachinzvimbo chemusoro wekereke. Kwozouya mutevedzeri wake, nemutevedzeri wakewo, mukuru werutivi rwechikoro chemusi weSvondo, bishopu ari pamusoro pemapasita, maachibishopu, mametroporiteni, makadinari, mapopu. Apa tangotaura zvimwe zvezvinzvimbo zviri pamutsetse wevakuru vebato rekereke. Matongerwo ekereke aya ndiwo aingove matongerwo ehushe hweRoma munezvematongerwo enyika.
Muti une mapazi ane hurefu hwakasiyana. Vanhu vanokwidziridzwa muzvinzvimbo zvemukereke, vachifunga kuti vari kubatira Mwari. Asi vanenge vachingobatira bato rekereke.
Saka panokura kereke, inobva yatanga kutongwa nevanhu nezvinzvimbo zvavo zvekukwiridzirana nemifungo yavo vega.
GENESIS 15:11 Ipapo magora akaburuka kunyama, asi Abrahama akaadzinga.
Pakuita sungano naMwari, Abrahama akadzinga magora. Saka magora anomiririra muvengi.
Asi mubato guru rezvechitendero mune mukana mukuru wekuti hushumiri “hwemagora” husimudzirwe musangano. Imomo “anogara” akadakara mumapazi epamusoro soro, achidya musangano. Iyi itsika yavanikoraiti apo vakuru vechitendero vanotsikirira vanhu, vanhu ava vanozoona kuti zvinodiwa kwavari kuti vave nhengo dzekereke kuva nekuteerera kwemapofu. Mwari anovenga tsika dzavanikoraiti, dzinova kusimudzirwa kwemunhu mutsvene pamusoro pevamwe vose vari musangano. Saka muvengi anobva atonga sangano guru rekereke. Kunyengera kwakachena.
Rudzi rwekereke yakadai rwakamiririrwa nemukadzi akaremara aida ruponeso.
Mukadzi mufananidzo wekereke. Mukadzi akaremara anomiririra kereke yakaremara pamweya yeNguva yeRima. Simba rekereke rakashandurwa kubva munezvematongerwo enyika uye tsika dzechipegani. Asi zvematongerwo enyika nechitendero zvinosangana munyakanyaka yemutambo werufu. Vanhu 68 miriyoni vaipikisa kereke yeRoman Catholic vakaurayiwa muNguva dzeRima nenguva dzakatevera dzacho dzemutsiridzo dzakatevera mutsiridzo dzemumutsiridzi wekuGerman, Martin Luther.
Tarirai kuti Mwari akati kudii kukereke yechitatu muBhuku raZvakazarurwa.
ZVAKAZARURWA 2:15 Nokudaro unavamwe vo vanobatisisa saizvozvo dzidziso yavaNikoraiti.
VaNikoraiti. Vanosimudzira munhu mutsvene anobva apamba sangano kana ungano. Pope ndiye mudzvanyiriri mukuru wezvechitendero. Mufundisi anotevedzera muenzaniso wake achitonga nenzira dzepfungwa dzake. Sangano, vatapwa muhutongi wehudzvanyiriri uhu, vanobva vatorawo mweya wamufundisi anovatungamirira. Haizi nzvimbo yakanaka kuti muKristu awanikwe ari.
Hutungamiri hwevanhu hunoisa tsika dzevanhu uye dzidziso nemirairo. Kana mufundisi akarambana nemukadzi akaroora zvakare vanhu vakawanda vanotevera kunopinda kereke yake nekuti vanoziva kuti ivo vanenge vavanemvumo yekuramba nekuroorawo zvakare. Kana mufundisi akatendera kunwa nekuputa, sangano rinopedzisira roita saizvozvo.
MATEO 15:9 Asi vanondinamata pasina,vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yavanhu.
MaKristu haakwanise kutenda kuti mukuru wekereke yavo anokwanisa kuva achitadza. Vanotevera vatungamiri vavo kukunda zvavanoita Bhaibheri. Mwari anovenga kuita kwekereke pavanokwiridzira vanhu vanovatungamirira vachitungamirira masangano nenhema dzavo nemirayiro yakaitwa nevanhu, kutenda uye zvimisikidzo zvevanhu.
Kunyanya kana mufundisi achiti chegumi ndechake. Saka zvinenge zviri pachena kuti chii chinokurudzira hutungamiri hwemakereke: mari nesimba pamusoro pevanhu. Judasi akasarudzawo mari.
Jesu anovimbisa hushe hwedenga (Mweya Mutsvene uchishanda mukati memoyo nepfungwa dzevanhu) asi hutungamiri hwevanhu hwakaita kereke huru nezvidanho zvakawanda uye kusimudzira hushumiri uye mabasa nemakanzuru anodzosera kumashure zvinhu zvizhinji zvakaiswa naJesu kuitira kuti vawane nhengo zhinji dzevanhu vanopinda kereke yavo. Saka chiprista cheTestamente Yekare chakatukwa naJesu chakazvuzvurudzwa nemusuwo wekumashure nekereke yeCatholic kuitira kuti vave nechokwadi kuti kereke inozokura kwazvo munguva yaitevera. Mutungamiri wemunhu anotonga inzira inobudirira kwazvo yekukura kwekereke.
Mufananidzo unotevera ndiwo mufananidzo wechina kubva kunaMateo, uchimiririra nguva yekereke yechina yaive mafungu aisumuka zvakadzikira kwazvo eNguva yerima kubva muna 6 00 AD kusvika muna 1517 AD pakatanga rumutsiridzo rwaLuther. Munguva iyi kereke yeCatholic yakasvika pamusoro-soro pemuganhu wemasimba muEurope. Ipapo nguva yaidaidzwa kuti Black Death yemuna 1348 – 9 yakadzikisira huwandu hwevanhu muEurope zvekuti vanhu vaive neminda mikuru vanoremekedzeka, nekereke vakatanga kurasikirwa nepfuma yavo uye simba ravo pamusoro pevanhu. Zvikwata zvevanofamba vachitengesa zvakatanga kusimuka vanhu vakatanga kuramba hudzvanyiriri hwekereke. Asi Tiriniti yaive yadyarwa mupfungwa dzevanhu kwenguva refu, zvekuti chero vamutsiridzi havana kubvira vaita mibvunzo nayo. Muna 1553 John Calvin, mumutsiridzi wevemasangano akabuda muRoma akapisa mumwe wevemasangano Michael Servetus, dhokotera wekuSpain, nekuda kwekuti aive asingatendi kuTiriniti.
RUKA 13:20 Akati zve: Vushe bwaMwari ndichahufananidza neiko?
21 Bwakafanana nembiriso yakatorwa nomukadzi akaiisa muzviyero zvitatu zvevupfu, kusvikira bwose bwaviriswa.
Mukadzi anomiririra kereke. Kereke yeRoman Catholic yakatonga Europe muNguva yeRima.
Nguva yekereke yechina inonzi Tiatira, zvinoreva kuti “mukadzi anotonga”.
Munguva yekerereke yeTiatira iyi Mwari akati
ZVAKAZARURWA 2:20 Asi handifari nechinhu ichi kwauri, kuti unotendera uya mukadzi Jesaberi unozviidza muporofitakadzi, vuye unodzidzisa nokutsausa varanda vangu, kuti vaite vupombwe, nokudya zvakabairwa zvifananidzo.
Jesaberi. Mukadzi aive akaipisisa wemuTestamente Yekare. Uyu ndiwo muenzaniso wekereke yaitonga zvakanyanya muNguva yeRima. Kereke yeRoman Catholic ichiri yakazadzwa nemweya wekunamata zvifananidzo zvezvivezwa zvevanhu.
Idzidziso ipi yakamanikidzirwa pavanhu munyika mukati memakore 900 enguva yekereke yechina?
Akatora hupfu hunobikiswa chingwa, mufananidzo wedzidziso. Jesu, Shoko, ndiye Chingwa cheHupenyu. Akabva atora mbiriso akasanganisa nehupfu kuti ivigwe isaonekwe zvakanaka. Mbiriso inoshanda nekuora uye kuvirisa yopa mweya wekabhoni dhayokusayidhi inofutisa chingwa. Kufuta uku kunomiririra hunhu hwevakuru vekereke panofuta kuzvikudza kwavo, uye panokura masangano avo. Asi kukura kuita makereke makuru kunokonzereswa nekuvira uye kuwora kwembiriso. Ichi hachisi chiratidzo chakanaka.
Kunze kereke inoratidzika seyakanaka asi mukati yakawora nezvitendero zvisimo muBhaibheri.
RUKA 11:39 Ishe akati kwaari; Zvino imi vaFarise, munosuka kunze kwemukombe nendiro, asi mukati menyu muzere nokukara nokuipa.
VaFarise vaive vanhu vechitendero vari vakuru vemaJuda, sevaprista vaive vakuru vekereke yeRoman Catholic muNguva yeRima.
Saka ndeipi dzidziso yakaipa yakadzidziswa nekereke yekutanga ikadyarwa munjere dzemaKristu mukati memasenturi mapfumbamwe akakwana eNguva dzeRima pavaive vasina vakwikwidzi vaivagadzirisa?
Mbiriso yaive yakavigwa muzviyero zvitatu zvehupfu. Kereke yakaviga Mwari weTiriniti muBhaibheri nenzira yakangwara kwazvo yekuti vanhu havakwanisi kumuona pamavhesi akanyorwa muBhaibheri. Tarirai kutaura kunoshandiswa kusimo muBhaibheri asi kuchitsanangura Tiriniti.
Izwi rekuti “Tiriniti” pacharo harimo muBhaibheri uye “vanhu vatatu Mukuzara kweHuMwari”. “Mumwe muvatatu”. “Vatatu mumwe”. “Mwari mumwe muVanhu vatatu”. “Munhu wechipiri Mukuzara kwehuMwari”. “Baba neMwanakomana vane kukosha kwakafanana”. “Mwari Mwanakomana”. “Mwari Mweya Mutsve”. MaKristu haakwanisi kutsanangura kuti nei Bhaibheri richiti “Mwanakomana waMwari” asi risina kubvira rati “Mwari Mwanakomana”. Bhaibheri rinoti “Mweya waMwari” asi harina kubvira rati “Mwari Mweya. Asi kanokwana kagumi nekatanhatu Bhaibheri rakati “Mwari Baba”. Iyi ndiyo mbiriso yakavigwa inovidza. Kereke yakakwereta pfungwa yeTiriniti kubva kumapegani ekuBabironi uye kuEgipita vakabva vashandisa ruzivo rwekuGiriki (mumwe muvatatu uye vatatu mumwe) kuti vanyepedzere kunge pfungwa idzi dzakavanzika muBhaibheri. Ndicho chikonzero nei vaisada kuti vanhu vaverenge Bhaibheri.
Saka nekufamba kwemakore maKristu akatora tsika yekutenda zvavaiudzwa nevakuru vemakereke. Tsika iyoyo yakaenderera mberi nanhasi ichiriko.
Saka mambo Constantine akashandisa kanzuru yeNicea muna 325 AD kuti amanikidze vanhu kuti vatende zvinhu izvi zvisimo muBhaibheri kuti avarasise nepfungwa yeTiriniti. Izvi zvakaitwa kuti maKristu nemapegani vabatane sevanhu vanotevera Tiriniti mukereke imwechete yeRoman Catholic. Nekugamuchira kutenda kusimo muBhaibheri kweTiriniti, maKristu mukereke vaive vasununguka kuti vatende zvimwe zvinhu zvose zvisimo mumagwaro zvakare, zvakaita sekuzviwisira kunaPope weRoma kana vachida kupona. Kutenda mukutadza zvisina kutya nekuti vaikwanisa kuzotenga kuregererwa kwavo pazvivi. Kutenda zvakanyorwa muBhaibheri kwaive kusisina kukosha.
Ipapo Mwari akabva arasikirwa neZita rake. Vanhu vatatu havakwanisi kudaidzwa neZita rimwechete. Bvunzai muKristu kuti zita raMwari rinonzi ani, mugotarisa kukanganisika kunotevera mubvunzo iwoyo. Nekuti vanenge vari nemufananidzo weVanhu vatatu vakasiyana, havakwanisi kuwana zita rimwechete raMwari. Saka vakanyengerwa pakubvuma kuti mazita ezvinzvimbo zvitatu ndiwo Zita raMwari.
Vanoramba vachiti “Muzita raBaba reMwanakomana neroMweya Mutsvene” asi havakwanisi kukuudzai kuti Zita raBaba reMwanakomana neroMweya Mutsvene ndiyani.
Mapostora vaibhabhatidza Muzita raJesu, nekuti kuzara kwevuMwari kunogara maari pamuviri.
Saka zita raMwari remunhu ndiJesu Kristu ndiro zita raBaba Mwanakomana nereMweya Mutsvene.
Kuwedzera pakurasikirwa neZita raMwari, makereke akadzikisira Jesu kuti ave Munhu wechipiri pakuzara kwovuMwari vodzidzisa kuti vadzidzi vaJesu vakatadza pavakabhabhatidza nezita raJesu Kristu. Saka kereke haichakwanisi zvakare kudzoserwa pakuva sekereke yekutanga yekuTestamente Itsva sezvo vachitenda kuti vanofanira kugadzirisa zvakatadzikwa nemapositora pakereke yekutanga. Saka kana tichitarisa pamakereke, kune kutadza kwakawanda kunoda kugadziriswa muBhaibheri saka zvakadaro kwavari, Bhaibheri harisi Chokwadi Chikuru. Iyi inzira yekubika kuparadzwa kwenguva inouya. Kutenda kuti mune kukanganisa muBhaibheri kumukira Shoko raMwari kuri pachena.
Ruka anotaura kuti nekuda kwekukanganisa kwakakurira maJuda uye kukanganisa kuchakurira kereke mukati meNguva yeRima, hakuna vanhu vakawanda vachaponeswa.
Ruka akanongedzera kukanganisa kwakaitwa nemaJuda nevakuru vavo vezvitendero nekuti ndiko kukanganisa kumwechete kwaizoitwa nekereke nevakuru vayo.
MaJuda zvese nemaHedeni havagoni kurarama vachitevera Bhaibheri sezvariri.
Vese vanoramba vachisuduruka vachiwira munzira dzakaitwa neruzivo rwevanhu dzinoita sedzakanaka kwatiri asi dzisina kunyorwa muBhaibheri. Tinoda kwazvo tsika dzevanhu kukunda kuda kwatinoita Bhaibheri.
Santa akabva kupi? Bvisai “n” pakati momuisa kwekupedzisira kweizwi iroro munowana “Satan”.
VAGARATIA 4:9 Asi zvino zvamunoziva Mwari, zvikuru zvamunozivikanwa naMwari, modzokerazve seiko kunezvokuvamba zvisinesimba, zvovurombo, muchida zve kutanga kuva varanda vazvo.
10 Munochengeta misi nemwedzi, nenguva namakore.
11 Ndinotya pamusoro penyu, kuti zvimwe ndakabate-basa pasina.
Kisimusi inonyatsozadzisa chinotsanangurwa naPauro achiti huranda. Aitya kuti izvi zvingatadzise kuedza kwake kubatsira vanhu.
Zuva rechi 25. Mwedzi wechi 12. Nguva yeKisimusi. Zuva rekupemberera kuberekwa kwaJesu gore rega rega.
Hatina kubvira taudzwa neBhaibheri kuti tirangarire kuzvarwa kwaJesu.
Asi maHedeni anoda tsika dzekereke yavo uye mitambo yavo yavanopemberera kukunda zvavanoita Bhaibheri.
Mbeu yekukanganisa yakadyarwa muNguva yeRima kuitira kutibvisa kuShoko raMwari rakanyorwa yakabereka muti mukuru kwazvo pakupedzisira.
MaKristu ari kumukira vashoma vasara vachiri kuedza kutevera Bhaibheri.
RUKA 13:22 Zvino wakafamba namaguta nemisha, achidzidzisa, achingoenda Jerusarema.
23 Mumwe akati kwaari: Ishe, vachazoponeswa vashoma here?
24 Akati kwavari: Irwai kupinda nesuwo rakamanikana; nokuti vazhinji, ndinoti kwamuri, vachatsvaka kupinda, asi havangagoni.
“Pakamanikana” kagwara kaduku duku. Isu vanhu, tese maJuda nemaHedeni, hatisisina shungu dzekutsigira zvatinotenda nemavhesi eBhaibheri. Saka nekudaro hatichagari mumvura dzeShoko.
Pamunongotenda mune chinhu chisina kunyorwa muBhaibheri, hamusisiri pakamanikana pagoronga panofamba nemvura unova musuwo wekupinda Denga.
Sezvo kurarama zvinodiwa neBhaibheri sezvazviri kusisina kukoshera maKristu, havasi vazhinji vachaponeswa kubva kunguva yeKutambudzika kukuru iri kuuya sedutu remhepo ichatitsvaira tese, kunze kwekunge Mwari atora vake vatsvene vachadzoswa mukushambidzwa nemvura dzeBhaibheri.
Kuponeswa kubva kuhadesi hakuna kutivimbisa kuti tichaponeswa kubva kunguva yeKutambudzika kukuru. Inyaya mbiri dzakasiyana.
RUKA 13:25 Panguva iyo kana mwene weimba asimuka, azarira suwo, imi mukatanga kumira kunze, mukagogodza pasuvo muchiti: Ishe! Tizarurirei! Iye akapindura, achiti kwamuri: Handikuziviyi imi kwamakabva.
RUKA 13:26 Zvino muchatanga kuti: Taidya, tainwa pamberi penyu, vuye maidzidzisa panzira dzemumisha yedu.
Aya maKristu akaponeswa ari kudanidzira kwaAri.
RUKA 13:27 Asi iye uchati: Ndinokuvudzai, handizivi kwamakabva; ibvai kwandiri, imi mose, vaiti vezvisakarurama.
Kuita zvisakarurama kuita chinhu tichiziva kuti chakaipa. Tinoziva kuti tinofanira kutenda kuBhaibheri chete. Mwari haafadzwi zvachose nemifungo yavanhu nemazano avo. Kana tikatenda chero chinhu chisiri muBhaibheri, Mwari anenge asisina chekuita nesu muhurongwa hweKuuya kwake kwechipiri.
Kugamuchura Kristu saIshe neMuponesi wedu kunotiponesa kuti tisaende kugehena. Asi tinodawo kuponeswa kubva kunguva yeKutambudzika kukuru kupfurikidza kutevera Shoko raMwari sezvazviri.
Jesu anoda chete maKristu anotenda kuBhaibheri kuti vave mukadzi wake. Mukadzi wake anofanira kutora Zita rake. Saka tinofanira kubhabhatidzwa muZita raJesu Kristu. Hakuna imwe nzira yatingatore nayo Zita rake.
RUKA 13:28 Apo pachave nokuchema nokugeda-geda kwameno, kana muchivona Abrahama naIsaka naJakobo navaporofita vose vari muvushe bwaMwari, asi imi mabudiswa kunze.
MaKristu akaponeswa havazokwanisi kuzvitenda kuti havana kubudirira kukwira kudenga kunosangana naIshe paanosangana nemukadzi wake kumakore. Vacharamba vachiti pane kukanganisa kwakaitika. Vateveri vaHillary Clinton vakatadza kuzvibvuma kuti akakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dzemuna 2016. Akakunda zvimwe zvibodzwa zvine mbiri zvinokwana mamiriyoni matatu kukunda Trump. Vakati ngakuverengwe zvakare, asi hazvina kubatsira. Murambiwa Trump, akarambwa nevese vanozviita vanoziva, akakunda. Ichi ndicho chiratidzo chenguva yatiri kurarama, kana takateerera. MaKristu akaponeswa anotenda zvidimbu zviduku zveBhaibheri zvinovaitira vachasiiwa, kuita kwavo kuchaputsanyiwa. MaKristu akarambwa, vari kunze kwemasangano emakereke, vachakunda. Chishamiso chikuru chakamirira makereke munguva inouya. Ndivo vanofarirwa zvakanyanya parizvino. Vachazokundwa panguva inouya.
RUKA 13:29 Vachabva mabvazuva, nokumavirira, nokumusoro, nezasi, vakagara muvuShe bwaMwari.
Pakumutswa kwevakafa, kereke yenguva nomwe dzese dzemakereke ichamutswa.
RUKA 13:30 Tarirai vari’po vokupedzisira vachava vokutanga, novokutanga vachava vokupedzisira.
Mbeu yechibage kana yekoroni inokohwewa pakupedzisira penguva yekereke yekupedzisira inofanira kuva yakafanana nembeu yakadyarwa mukati memguva yekereke yekutanga. Saka nguva yekereke yekupedzisira inofanira kudzoserwa kudzidziso dzenguva yekereke yekutanga. Nemamwe mazwi, dzidziso yemapositora eTestamente Itsva yakatendwa munguva yekereke yekutanga ikarasika muNguva yeRima inokwanisa chete kudzoswa zvechokwadi nekudzidziswazve munguva yekereke yekupedzisira.
Kuitira kuti tikohwewe, tinofanira kufambirana pakupedzisira nekutenda kwaive nekereke pakutanga. Makereke emaKristu haana ruzivo zvachose nechikamu ichi muhurongwa hwaMwari hweruponeso.
RUKA 13:31 Nenguva iyoyo vamwe vaFarise vakasvika, vakati kwaari: budai mubve pano nokuti Herode unoda kukuvurayai.
Mambo herode vaimiririra zvematongerwo enyika. Jesu haana kuteerera Herode saka zvinotiudza kuti zvematongerwo enyika nechitendero hazvisangani. Ichi chidzidzo chakakosha chaizokanganikwa nekereke. MaKristu anosvika mamiriyoni matatu akaurayiwa nemadzimambo eRoma. Muna 312 AD mambo Constantine akamisa kuuraiwa kwakaipa kwemaKristu. Vakafara naye kwazvo zvekuti vakasarudza kumutambira, zvisinei nekuti aive munhu wezvematongerwo enyika, akava nesimba pamusoro pekereke. Akashandisa kanzuru yeNicene yemuna 325 AD kuti amanikidzire dzidziso yeTiriniti pamaKristu vakabva vatanga kuzivikanwa nezita rekuti kereke yeRoman Catholic . Nekuda kwezvikonzero zvatisingakwanisi kurangarira nhasi, kereke yeRoman Catholic yakatambira kupindira kwezvematongerwo enyika uku uye, mukati memakore zana, kereke yeCatholic yaive yambobaiwa nemadzimambo eRoma yakanzwa kuyananisirwa mumoyo mayo mumurairo wekuuraya vose vaisatenderana nedzidziso yeTiriniti.
RUKA 13:32 Akati kwavari: Endai mundovudza mhungubwe iyo, muti: Tarira ndinobuditsa mweya yakaipa, ndinoporesa nhasi namangwana, nezuva retatu ndinopedzisa.
Jesu aive asingawadzani naHerode wezvematongerwo enyika. Mhungubwe imhuka yakachenjera ine chitsotsi. Ndiko kutukwa kuri munezvematongerwo enyika, vanova nechitsotsi kana vava mazviri. Paakatumirwa kunaHerode naPirato, Jesu akabva aramba chero kutaura naHerode. Saka, kubva pamuenzaniso uyu, vakuru vemakereke vanofanira kudzidza kutambira kure nezvematongerwo enyika.
RUKA 13:33 Asi ndinofanira kufamba nhasi namangwana nerinotevera, nokuti hazvingaitiki kuti muporofita avurawe kunze kweJerusarema.
Musoro wezvematongerwo enyika wechiJuda, Herodi, haana kukwanisa kumisa kuitika kwehurongwa hwaMwari mumazuva akazoteverwa nechiitiko chepaCalvari. Jerusarema, guta dzvene, ndiko kwaivurawa maporofita aMwari. Jerusarema, guta dzvene. Asi ndiko Jesu, Shoko raMwari kwaaizofira.
RUKA 13:34 Jerusarema, Jerusarema, unovuraya maporofita, nokutaka namabwe avo vakatumwa kwauri; ndakanga ndichida kazhinji sei kuvunganidza vana vako semhambo inovunganidza hukwana dzayo munyasi mamapapiro ayo, mukaramba.
Jerusarema, guta dzvene, rakagamuchira Jesu paakatasva mbongoro (kuzvideredza kukuru) akavapa hupenyu husingaperi, asi vakuru vavo vezvitendero vakamuramba vakarishandura kuita guta rerufu.
Nenzira imwe makereke, kunoungana vanhu vatsvene, vanoramba nekuuraya kurudziro yeBhaibheri kuti maKristu anozofara kutenda zvinhu zvisiri muBhaibheri. Kuipa kwazvo, vanozofara kutuka avo vanotenda zvakanyorwa muBhaibheri. Kuchengetedzeka kwedu kunobva muBhaibheri, asi makereke haadi izvozvo. Vanosarudza tsika dzevanhu.
Ndivanani vanonyanya kuzvidza vanhu vanoda kurarama vachitevera Bhaibheri sezvazviri? Makereke. Vanhu vanoda zvinotaurwa nemakereke avo, kwete zvinotaurwa neBhaibheri. Chichechi-chechi (ini ndiri wekereke yangu) chatsiva chiKristu (ini ndiri waJesu neBhaibheri).
RUKA13:35 Tarirai, masiirwa imba yenyu rava dongo; asi ndinoti kwamuri: hamuchazondivoni, kusvikira muchiti: Ngaarumbidzwe iye unovuya nezita raShe.
“Imba” yemaJuda yaive Temberi. Nguva yakatevera apo Jerusarema yakaona Jesu yaive nguva yakapinda Jesu muJerusarema akatasva mbongoro vakamupemberera saMambo aiuya muzita raMwari. Asi mumashure maizvozvo vaizomuramba nekumuvuraya. Kurambwa uku kwakagadzirira nzira yekuti Titusi auye aparadze Temberi yavo. Titusi aizosiya tembere yava dongo rinonyangadza.
Vaive naye Mesia vakamupururudzira asi vakuru vavo vakabva vavaudza kuti varambe Jesu, nehurema vakazviita. Zvino ivo nevakuru vavo vakaripira kuita kwavo uku pakaparadzwa Temberi yavo neguta ravo. Tisingataure maJuda 1 100 000 vakaparara mukati menguva yakaparadzwa Jerusarema. Kuramba Jesu kana kuramba zvakanyorwa muBhaibheri kunounza nhamo yakaomarara.